PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-17 - Kusolwa umkhonyovu ngezigidi ezikhokhiwe
Kusolwa umkhonyovu ngezigidi ezikhokhiwe
Kunemibuzo eminingi engenazimpendulo
SEKUVELE izinsolo ezishaqisayo ngesizumbulu samarandi esingaphezu kuka-r22 million, esikhokhwe yisouth African Broadcasting Corporation (SABC) isikhokhela inhlangano emele abaculi i-independent Music Rights Association (IMPRA) esibike ngakho ngesonto eledlule.
Le mali ekhokhelwe I-IMPRA izokhokhela amaciko ngokudlalwa komculo wawo emsakazweni nama- video kumabonakude.
Okushiye imibuzo wukukhokhelwa KWE-IMPRA kuphela ekubeni kunenye inhlangano eyenza umsebenzi ofanayo isouth African Performing Rights Association (SAMPRA) nengazange iyithathe ingxenye yayo ngoba ithi kunezinto engaziboni kahle ngesenzo SESABC.
Esitatimendeni sakamuva esikhishwe ngumnu Pfanani Lishivha omele ISAMPRA, kunemibuzo eminingi engenazimpendulo okuyiyo eyenze le nhlangano yahosha imfe kulolu hlelo. Nakhu okunye abakubalulayo ABE-SAMPRA;
Bafuna ISABC ikhiphe izinombolo ezihlolwe ngumcwaningi mabhuku ozimele eziqinisekisa ukudlalwa komculo ESABC nokuthi ngobani abanikazi bawo.
Babuza ukuthi kungani ISABC iphuthume ukukhokhela le nhlangano ekubeni bekusalindwe umhlangano nedepartment of Communications (DOC) ukuxazulula ukungaboni ngaso linye nezinsolo abebenazo.
Bathi I-IMPRA ekhokheliwe imele u-5% kuphela wamaciko njengoba sebethole nokuthi isinxenxa amalungu abo ukuba iwajoyine ukuze ahlomule kule mali esikhokhiwe.
Basola ISABC ngokunikezela ngemihlomulo yamaciko ibe yazi kahle ukuthi ikhokhela inhlangano engafanele ngoba bona (SAMPRA) banobufakazi bokumela u-93% wale mboni.
“I-DOC yazise ISABC ngasekupheleni kukanhlaba (May) ukuthi izohlela umhlangano ukuze kulungiswe lolu daba - pho kungani ISABC inqume ukwenza isimemezelo sokukhokhela I-IMPRA sekusele izinsuku ezimbili kube nomhlangano.
“Ibijaheni? YISABC kuphela enqabayo engafuni ukwenza izinto ngendlela. Ingaphezu kuka-r200 million imali esikhokhwe yisaMPRA kusukela ngo-2014 ngoba yiyo kuphela ebisemthethweni - ngeyesabc kuphela imali ebingayitholi ngoba ibingafuni (SABC) ukula-ndela umthetho.
“YISAMPRA kuphela enezivumelwano nezitolo, izindawo zokudlela, amabhasi njalo njalo ukuze le mali eqokelelwayo ikhokhelwe abanikazi bayo. Sinazo nezitatimende zabahlomulile kozidingayo,” kunaba isitatimende sikalishivha.
Okushaqisayo okuvezwe ngumthombo onxuse ukungadalulwa wukuthi kunokukhwabanisa okunzulu okwenziwa kusetshenziswa I-IMPRA. Uthi kwabathinteka kulo mkhonyovu kukhona nobeyisikhulu KWASABC.
“Bayazi ukuthi ukuxazulula le ndaba kuzothatha isikhathi eside ngakho-ke bazolokhu bezitamuzela inzuzo yalezi zigidi nsuku zonke.
“Ukuhlala kwayo isikhathi eside kwi-akhawunti yabo kuzobe kusho ukudla kahle kwabo,” kusho umthombo.
Ephendula imibuzo ayithunyelelwe YILANGA Langesonto okhulumela ISABC umnu Kaizer Kganyago, wenqabile ukukhipha izinombolo abanazo ngokwalezi zinhlangano.
“Ngokwemigomo kasivumelekile ukukhipha imininingwane nezinombolo zalezi zinhlangano, kungamele uzifune kubona. Umhlangano obuzobakhona bekungewona owokuvimba ukuqhubeka kohlelo oluqale eminyakeni emine edlule kodwa bekungowokuba umnyango uqonde kangcono okuqhubekayo bese uyalekelela, nokuyinto esaqhubeka.
“Sisebenzise ulwazi esiluthunyelelwe yilezi zinhlangano ngamalungu azo, sase sibheka izingoma ezidlaliwe ngoba le mali ngeyokuthi zingaki izingoma ezidlaliwe futhi zadlalwa kangaki. Kakulona inani labaculi eliphambili kodwa ngelokudlalwa kwengoma,” usho kanje.
YISABC kuphela enqabayo ukwenza izinto ngendlela. Ingaphezu kuka-r200 million imali esikhokwe YISAMPRA kusukela ngo-2014...
KUQUBUKA imibuzo ngokukhokha KWESABC isizumbulu semali ikhokhela inhlangano emele abaculi I-IMPRA ekubeni kunenye inhlangano eyenza umsebenzi ofanayo kodwa yona kayikhokheliwe.